Health Archives - TheeSayChin
လေဖြတ် ထားလို့ စကားမပီပဲ လုံးဝါးနေသူများအတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ ဆေးနည်းလေးမို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။လေဖြတ်ပြီးနောက် စကားမသွက်သူများ၊ စကားမပီသသူများ ရှိနေကြပါသည်။ မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများထဲတွင်လည်း မကြာခဏ မြင်တွေ့ရ၍ အတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြပေလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး လေဖြတ်သည်ကြား၍ သွားရောက်ကြည့်ရှု့ရာ ထိုဝေဒနာရှင်မှာ စကားများစွာ ပြောနေရှာသော်လည်း ဗလုံးဗထွေး ဖြစ်နေ၍ အတော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။နောက်တစ်ဖန် ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ရာ ယခင်နှင့်မတူ စကားပြောသံကို ပီပီသသသဲသဲ ကွဲကွဲကြားရပြီး စကားပြောပါသွက်လာသည်မို့ ဘယ်လိုကုလိုက်တာလဲ မေးကြည့်ရာ သပွတ်ခါးသီးကို တောကများများရှာဝယ်ပြီး လူတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းနင်းနိုင်အောင်ကျယ်သည့် စဉ့်အင်တုံတွင် ဆား(၁၀)သား အောက်ခံထားကာ အပေါ်တွင် သပွတ်ခါးသီးစိမ်း (၁၀)လုံးကို တင်၍ နေ့တိုင်း နံနက်တစ်ခါ၊ ညနေတစ်ခါ နင်းပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။အိပ်ရာမှ မထနိုင်သူများအား သပွတ်ခါးသီးနှင့် ဆားရောပြီး […]
ယခုခေတ်မှာ ဈေးသက်သာပြီး စားသုံးရလွယ်ကူတဲ့ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲ ခြောက်ထုပ်တွေ ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ခေတ်စားလာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကလည်း စားသုံးသူဟာ အလွန်ကို များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့ အဖြစ်လေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးကို မျှဝေပါရစေနော်…………။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်လေးကတော့ ထိုင်ဝမ်က အထက်တန်းကျောင်းသား တစ်ဦးရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ အဆိုပါကျောင်းသားဟာ နောက်ဆုံး နှစ်စာမေးပွဲအတွက် မနားမနေကြိုးစားရင် ညစာတောင် ချက်ပြုတ်ပြီး မစားနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ ဒီလို ချက်ပြုတ်မစားနိုင်တာကြောင့် တစ်နှစ်လုံး အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်ကို နေ့စဉ်စားသုံးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထိုင်ဝမ်ရဲက နာမည် စက်မှု တက္ကသိုလ်ကို တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ယခုလို ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ဟာ ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆာလွန်ချိန်တွေမှာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲထဲက […]
၁။ သင့်အဆုတ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ၂။ သင့်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲစိမ်း စားပေးပါ။ (green beans to stop the period) ရပ်ချင်ရင်စားတာပါ။ ၃။ သင့်ဆီးလမ်းကြောင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ကြက်သွန်နီကို အစိမ်းစားသုံးပေးပါ။ ၄။ သင့်ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက်မှာ ရေများများသောက်ပြီး၊ ညဘက်မှာ ရေလျှော့သောက်ပါ။ ၅။ သင့်နှာခေါင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပူစီနံရွက်ကို ပုံမှန်စားသုံးပေးပါ။ မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား ၆။ သင့် ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ညအိပ်ရာမဝင်ခင် အပေါ့စွန့်ပါ။ ၇။ သင့်အသည်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် အဝလွန်စေမယ့်အစာတွေ စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ […]
ဘီယာထဲက ဟော့ပ်က အသည်းနဲ့ အူမကြီး ကင်ဆာကိုပျောက်စေနိုင်သလား? သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အကျိတ်တွေကို သတ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းကို ၎င်းရဲ့အပွင့်ထဲမှာ တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ • အူမကြီးကင်ဆာ ဆဲလ် တွေကို သတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ပေါင်းတွေလဲ အပင်ထဲမှာပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်• သူရဲ့ အစွမ်းကို ၂၀ ခန့်က တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကောင်းတဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်• ဆက်လက်လေ့လာရဦးမှာဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ကုထုံးအဖြစ်အသုံးမပြုခိုင်းသေးပါဘူး ဘီယာအရသာ ပိုကောင်းအောင် သူတို့ကိုအသုံးပြုတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘီယာသောက်ချင်းဟာ ဟော့ပ်ဓါတ်ကို ပိုများအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ စမ်းသက်ချက်တွေအရ အပင်ထဲမှ ဒြပ်ပေါင်းဟာ အသည်းကင်ဆာဆဲလ်နဲ့ အူမကြီးကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား ဒါပေမဲ့ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုဟာ […]
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရာသီမှာ ရေချိုးရမည့်အချိန်
ဆောင်းဥတုတွင် အေးသည်ဟု ဆိုကာ ရေမချိုးဘဲ မနေသင့်ပေ။ အအေးပတ်မည် စိုးသဖြင့် ရေမချိုးဘဲ ရက်သတ္တပတ် ကြာနေသူ သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ဦးသည် သွားဖုံးများ ကြွပြီး အစားအသောက်ပျက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မျက်ချေးများ ထွက်ပြီး မျက်စိကြည့် မကောင်း ဖြစ်လာသည်။ ရေမချိုး ရသဖြင့် ကိုယ်တွင်းအပူ ငုပ်ရာမှ အထက်သို့ အပူ အခိုးအငွေ့များ ဆန်တက် လာခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်(၆၅)နှစ် ကျော်သူများကို လူကြီးဟု သတ်မှတ်ပြီး ရေချိုးရမည့် အချိန်ကိုလည်း ဥတုအလိုက် သတ်မှတ် ထားသည့် လင်္ကာရှိသည်။ မြန်မာ ဆေးဆရာ များသည် လူကြီးများ ရေချိုးမမှား စေရန် လိုက်နာ ခိုင်းသည့်လင်္ကာမှာ မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app […]
လူတိုင်းနီးပါး အလွယ်တကူသောက်လေ့ရှိတဲ့ ပါရာစီတမော့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ပါရာစီတမော့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပါရာစီတမော့ ကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအဖြစအသုံးပြုကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်လက်မလောက်တောင်မရှိတဲ့ဆေးလုံးလေးဟာ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနေကြောင်းကိုတော့ ဘယ်သူမှသတိမထားမိကြပါဘူး။ပါရာစီတမော့သောက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ။ ညှာတာစိတ်လျော့နည်းလာမယ် ပါရာစီတမော့ဟာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုလျော့ချပေးရုံတင်မကပဲ သနားညှာတာစိတ်ကိုပါ လျော့ချပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပါရာစီတမော့သောက်ထားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ အကောင်းမြင်စိတ်လျော့နည်းနေပြီး ခံစားချက်တွေမဲ့နေသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား ဒီအခကြျကိုတော့ သုတသေီတှဟော ပါရာစီတမော့၁၀၀၀ မီလီဂရမျသောကျထားတဲ့ ကြောငျးသား ၄၀ နဲ့ မသောကျထားတဲ့ ကြောငျးသား ၄၀ ကိုယှဉျပွီးလေ့လာခဲ့ကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ေ ကြာငျးသားအားလုံးကို ထိတျလန့ျဖှယျရာဇာတျလမျးရှဈပုဒျ ၊ ရကျရကျစကျစကျသတျဖွတျတဲ့အကွောငျးတှကေိုအသေးစိတျရေးထားတဲ့ စာအုပျ ၈အုပျကိုဖတျခိုငျးတဲ့အခါမှာ ပါရာစီတမော့သောကျထားတဲ့ကြောငျးသားတှဟော သိပျပွီးတော့ ထိတျလန့ျတုနျလှုပျခွငျးမရှိတာကိုတှေ့ခဲ့ရပါတယျ။အခုလိုဖွဈရတာကတော့ နာကငြျမှု နဲ့ သနားညှာတာစိတျ ကိုတှေးတောနိုငျတဲ့ ဦးနှောကျအစိတျအပိုငျးဟာတဈခုထဲဖွဈတာကွောင့ျဖွဈတယျလို့ သုတသေီတှကေယူဆထားပါတယျ။ ထို့အပြင် ပါရာစီတမော့သောက်သုံးလေ့ရှိတဲ့သူတွေဟာ […]
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆွမ်းဘုန်းပေးခါနီး အုန်းမောင်းခေါက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဂျပန်ခေတ်က ဖြစ်သည်စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မင်္ဂလာစေတီချောင်သို့ဂျပန်အရာရှိတစ်ဦးနှင့် စကားပြန်တစ်ဦးရောက်လာ၏ဆွမ်းစားချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ကြေးမောင်းထိုးတုံးခေါက်ရာ ဂျပန်အရာရှိက ဘာလုပ်တာလဲ ဟုမေး၏ စကားပြန်က ဆွမ်းစားမှာမို့ ကြေးမောင်းထိုးတုံးခေါက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြရာဂျပန်အရာရှိကြီးက ” ဒဘုန်းကြီးတွေ သူများလှူတဲ့ဆွမ်းစားတာတောင် ဒီလို ကြေးမောင်းတွေတုံးတွေခေါက်ပြီးစားရင် ကိုယ့်ဖာသာရှာစားရင်တော့ အမြောက်ဖောက်ပြီးများ စားမလား မသိဘူး” ဟု မှတ်ချက်ပြုသတဲ့ ထိုမှတ်ချက်ကို စကားပြန်က မင်္ဂလာစေတီဆရာတော်ကြီးအား လျှောက်ထားရာဆရာတော်ကြီးက ” ဘုန်းကြီးတို့ ဒီလိုကြေးမောင်းထိုး တုံးတွေ ခေါက်ပြီးစားတာဟာ ကြွားချင်လို့ မဟုတ်ဘူးဒီအနီးအနားမှာ ဘုရားဖူး ခရီးသွားသံဃာတော်တွေ ဆွမ်းမပြည့်စုံသေးရင်ဒီနေရာမှာ ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်းအပြည့်အစုံ ရှိပါတယ်ဆွမ်းစားကြွတော်မူကြပါလို့ အသိပေးဖိတ်ကြားတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် နောက်ပြီးတော့ ရွာတွေက ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်း လောင်းလှူကြသော ဆွမ်ဒါယိကာ ဆွမ်းဒါယိကာမ များအနေဖြင့့်မိမိတို့လှူလိုက်တဲ့ ဆွမ်း ခဲဘွယ်တို့ကို ဆရာတော် သံဃာတော်များ ဘုန်းပေးသုံးဆောင် […]
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စားပေးခြင်းမှ ရရှိသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးမျာ
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို စားသုံးကြသော သူများအတွက် မျှဝေပေး လိုက်ရပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှ ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူး များကတော့ (၁) ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ (၂) စိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ (၃) အရိုးကိုလည်း သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။ (၄) သွေးတိုးရောဂါ အတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ (၅) အသားအရေ ပျက်စီးမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၆) နှလုံးရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၇) အဆီကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ သတင်းများ Unicode ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို စားသုံးကြသော သူများအတွက် မျှဝေပေး လိုက်ရပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှ ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူး များကတော့ (၁) ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ (၂) စိတ်ဓာတ်ကျ […]